सीमा क्षेत्रका ३० नाका खुल्याे, कुन–कुन नाका खुला ? — Ratopost.com News from Nepal
सीमा क्षेत्रका ३० नाका खुल्याे, कुन–कुन नाका खुला ?
काठमाडौँ,१६ माघ। कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउनसँगै बन्द गरिएका चीन र भारततर्फका ३० वटा नाकालाई सरकारले खुला गरेको छ । गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नाका खुलाउन सर्कुलर पठाएको हो ।
यसअघि १४ नाका खोलिएकामा माघ ११ को मन्त्रिपरिषद्ले थप १६ नाका खुलाउने निर्णय लिएको हो । भारततर्फका धेरै नाका बन्द हुँदा सीमाका नेपालीले घरायसी सामान खरिद, नातागोता भेटघाट र खेतीपातीका लागि समेत सहजै ओहोरदोहोर गर्न पाएका थिएनन् ।
सीमा क्षेत्रका नागरिक कोरोना महामारीअघि भारतीय बजारमा पुगेर सस्तोमा दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्ने गर्थे तर नाका सिल भएपछि त्यो सुविधा रोकिएको छ । नाका बन्द हुँदा सुरक्षाकर्मी, प्रशासन तथा तस्करसँगको सेटिङमा आउजाउ हुने गरेको आरोप पनि छ तर यसमा पनि प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले तोकिएका नाकाबाहेकबाट मानिस आवागमन गर्न नदिइएको बताए ।
पशुपतिनगर (इलाम), काँकडभिट्टा (झापा), रानी (मोरङ), माडर (सिरहा), गौर (रौतहट), वीरगन्ज (पर्सा), रसुवागढी (रसुवा), कृष्णनगर (कपिलवस्तु), बेलहिया (रुपन्देही), जमुनाह (बाँके), गौरीफन्टा (कैलाली), गड्डाचौकी (कञ्चनपुर), खलंगा/पुलाघाट (दार्चुला), झुलाघाट (बैतडी), खजुरगाछी (झापा), भन्टाबारी (सुनसरी), कुनौली (सप्तरी), जटही (धनुषा), इनर्वा (धनुषा), भिट्टामोड (महोत्तरी), मलंगवा (सर्लाही), बंकुल (रौतहट), मटिअर्वा (बारा), सिम्रौनगढ (बारा), त्रिवेणी (पूर्वी नवलपरासी), महेशपुर (पश्चिम नवलपरासी), तौलिहवा (कपिलवस्तु), कोइलाबास (दाङ), सुरजपुर (बर्दिया) र तातोपानी (सिन्धुपाल्चोक) (स्राेतः कान्तिपुर दैनिक)